Wednesday June 05, 2013 - 04:30:10
Guddoomiyihii ahlu-sunna wal-jamaaca (Somaliya) Sheekh Cabdirasaaq Yuusuf Aadan Daabacaadii 1-aad 9/7/1427 H. 04/08/ 2006 Muqdisho –Somalia ARAR
Shiikh Cabdirisaaq wuxuu safka hore kaga jiraa culammada Ahlu sunna Wajamaacah ee sida gaarka ah isugu taxallujisay aqoonta gaarka ahna u leh ururrada adeegsada magaca diinka iyagoo leh ujeeddooyin ka dhan ah diinta.
Xaqiijinta arrintaas wuxuu shiikha ku bixiyey saacadaha ugu badan waqtigiisa sida ay ka warqabaan inta badan culammada Ahlu-sunna Wal-jamaacah ee Soomaaliya.
Taas waxay sababtay in billawgii 1995-tii culammada Soomaaliyeed u doortaan hoggaamiyaha Ahlu-Sunna wal-Jamaaca ee Soomaaliya; Waqtigaas oo aad u adkaa shiikhu:
· Wuxuu magaalada Muqdisho ka sameeyey idaacad iyo wargeys ku shaqeeya magaca Ahlu-sunna Wal-jamaaca.
· wuxuu booqday inta badan magaalooyinka dalka iyo kuwa deriskaba, si ay u kala faa’iidaystaan, una siyaarto Culammada iyo waxgaradka Ahlu-Sunnada, xog ogaalna ugu noqdo xaqiiqada ka jirta geyigaas.
· Wuxuu sameeyey safarro badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwo laghu casuumay isagoo ah guddoomiyaha Ahlu sunna ee Soomaalia, shiikh caadi ah, kulanno diineed dawli ah iyo shaqsi ahba.
· Wuxuu ku caan yahay ka qayb-qaadashada iyo abaabullidda dood cilmiyeedyada diiniga ah ee idaacadaha, T.V-yada, wargaysyada iyo kulannada kafool-kafoolka ah ee lagu horumarinayo laguna difaacayo diinta.
· Sidoo kale, wuxuu shiikha safka hore kaga jiraa muxaadarooyinka, siminaarada, tababarrada, wacyigelinta iyo kulan baxthiyeedka culammada Ahlu sunna ee lagu horumarinayo barnaamijta Ahlu-sunna Wal-jamaaca.
· Wuxuu qabtay,abaabulay,dhiirri geliyey, ka qayb qaatay muxaadarooyin, siminaaro iyo tababarro laga hirgeliyey waddamada Afrikada Bari.
Mudada 20ka sano ka badan ee shiikhu jidkaas dheer ku soo jirey wuxuu la kulmay labo xaalo oo kala duwan oo kala ah:
a. Wuxuu shiikhu la kulmay caalimiin, cabqariyiin iyo aqoonyahanno dibadda iyo gudaha ah kuwaasoo uu ka faa’iidaystey cilmi uu mahdiyey.
b. Wuxuu kaloo la kulmay caga-juglayn, khatar kaga timid sokeeye iyo shisheeye; shaqsiyaad iyo dawlado; Soomaali iyo ajanabi; arrintaan oo qudheeda wax ka tartay u dhabar-adayga khidmada diinta.
Sidaas darteed, Sheekhu asagoo ka faa’iidaysanaya fursadahan wuxuu arrimahaas ka qoray kitaabbo iyo risaalooyin ku dhow labaatan; oo kuwa la daabacay ay ka midka yihiin:-
1. Caddaynta Xaqqa & Nasiixada Xaqdoonka, Juska 1-aad, Tarriikhda Wahaabiyada.
2. Caddaynta Xaqqa & Nasiixada Xaqdoonka, Juska 2-aad, Maxaa lagu gartaa Afkaarta Wahaabiyada.
3. Caddaynta Xaqqa & Nasiixada Xaqdoonka, Juska 3-aad, maxuu yahay xugumka diinta Islaamka ee ku aadan bidcada.
4. Soomaaliya & Ahlu sunna Wal-jamaacah.
5. Xaqiiqada maxkamadaha.
6. suufiyada iyo salafka suuban
7. asmaa’un mukhtalifah wa ahdaafun mu’talifah.
Wuxuuna doortay inuu kusoo kordhiyo buuggan uu ku magacaabay “Farxaddii Guul Darrada”.
Buuggan wuxuu ka hadlayaa dagaalkii ugu wejiyada badnaa ee ka dhaca Soomaaliya, kaasoo magaalada Muqdisho ku dhex maray laba isbahaysi oo isku kala magacaabay:-
Midawga Maxaakimta Islaamiga!!! iyo Isbahaysiga la dagaallanka Argagaxisada!!!
Waxaa ka muuqanaya buugtaan uu Shiikhu soo bandhigey oo laga dheehan karaa marka si dhug leh loo akhriyo labo xaaladood:
In Shiikhu muddo usoo xereystey ama u soo qariibay la socodka, baxthiga iyo xog-ogaal u noqoshada afkaarta, barnaamijta, tadawurka iyo tabaha kooxahaan ku adeegta magaca diinta.
In gaar ahaan qormada buugaan “Farxaddii Guul Darrada” aanu helin waqtigii ku fillaan lahaa in lagu faah-faahiyo mawduuca uu xambaarsan yahay; waana wax la dareemi karo in duruufta hadda ka jirta dalka ay sidaas kaliftey.
Waxaan guud ahaan rajaynayaa:
ü In uu noqdo buuggii u horreeyey ee laga qoro dhacdadan.
ü In uu marjic u noqdo aqoon-yahannada iyo baaxithiinta doonaya inay macluumaad dheeraad ah ka helaan sababihii diyaariyey dagaalka iyo mirihii ka dhashay.In uu soo gudbiyo xogo iyo xaqaa’iq sabab u noqda fashalinta shirqoollada iyo sama bixinta ummadda.
Waxaan ugu ducaynaynaa shiikha in Eebbe (SWT) uu ajar iyo xasanaad ka siiyo dadaalka iyo dhiiriyada gaarka ah ee uu ka muujiyey soo bandhigidda buugaan.
Sh. Maxammed Cali Xasan